“Ha noqonin calooshiis u shaqeyste oo kale”… Gary Neville oo weerar culus ku qaadan Pogba – Gool FM
“Ha noqonin calooshiis u shaqeyste oo kale”… Gary Neville oo weerar culus ku qaadan Pogba
(Manchester) 13 Sept 2018. Gary Neville ayaa fariin muhiim ah u diray Paul Pogba, kadib markii xiliyadii lasoo dhaafay lala xidhiidhay inuu ka tagayo kooxda Manchester United.
Paul Pogba ayaa lala xidhiidhinayay inuu ku biirayo midkood kooxaha Barcelona iyo Juventus uu kasoo dhaaqay sanadii 2016, kadib khilaafka soo kala dhex galay isaga iyo Jose Mourinho.
Gary Neville ayaa ka codsaday xidiga reer France ee Paul Pogba inuu ixtiraamo kooxdiisa, isla markaana uusan foowdo ka abuurin gudaha Red Devils, si uu kaga tago garoonka Old Trafford, isla markaana uu ugu dhaqaaqo koox kale, wuxuuna sidoo kale kula taliyay inuusan noqonin calooshiis u shaqeyste.
“ka taageera ahaan ma jirto wax ka weyn kooxda, mana xiiseynayo shaqsiyaadka kale ee xambaarsan aragti kale”.
“Hadii aad ilaa iyo haatan ku sugan tahay kooxda taladeyda ayaa ah sidan: Pogba, way iska cadahay inaad dooneyso inaad u ciyaarto koox kale, laakiin waa inaad u dhaqantaa sidii qof xirfadle oo kale ah, si aadan ugu muuqan calooshiis u shaqeyste oo kale”.
Busquets oo sharaxaad ka bixiyay faafaahinta kulankiisa ugu horeeyay uu kasoo muuqday kooxda Barcelona
Sébastien Frey oo faallo ka bixiyay farqiga u dhexeeya laacibka reer Brazil ee Ronaldo iyo Cristiano